Momba anay - Meijiahua Corporation
Tianjin Meijiahua Steel dia vondron'orinasa ara-toekarena iraisam-pirenena, ao anatin'izany ny orinasa sy ny fananganana: Tianjin Tiankang Metal Product Co., Ltd. Tianjin Tongfu Metal Product Co., Ltd., Orinasa mpivarotra fanondranana: Tianjin Meijiahua Trade Co., Ltd. ary HK orinasa: Meijiahua Trade Co., Limited ..
Ny orinasanay dia manampahaizana manokana amin'ny fampidirana sy fanondranana fitaovana vy sy vokatra vy, ary izahay koa manao varotra mandalo, varotra anatiny ary fiasan'ny maso. Ny vokarinay dia namidy tany Eropa, Amerika, Nouvelle Zélande, Japon, Korea atsimo, Azia atsimo atsinanana, Moyen Orient, Afrika ary Hong Kong. Manana mpizara ao an-trano sy any ivelany izahay. "Kalitao avo, laza ary serivisy tsara" no foto-kevitray momba ny fitantanana. Miara-miasa am-pahatsorana amin'ireo namana eran'izao tontolo izao amin'ny fampandrosoana.
Ny orinasanay dia nandinika tsara hanatsara ny haavon'ny orinasa ary hametraka endrika tsara. Ny orinasanay dia manana manam-pahaizana momba ny teknika fanta-daza. Nampandroso ny fandrosoan'ny teknolojia haingana ny orinasa ary nahatonga ny teknolojia vokarin'ny orinasa, fitaovana lasa mpitarika manerantany.
Ny orinasanay koa dia mifantoka amin'ny fanamafisana ny fananganana marika. Nahazo ny anaram-boninahitra "orinasa manome voninahitra sy manome lanja ny trosa" izy io, ary orinasa voasoratra anarana ISO9001. Ny marika Tiankang Mesh anay dia nahazo valisoa marika Tianjinfamous ary marika famantarana malaza. Ny vokatra dia amidy any Eropa, Amerika, Azia ary firenena mandroso sy faritra hafa, mihatra amin'ny fambolena, fotodrafitrasa, tariby fifandraisana, fiara mandeha amin'ny fiara, tafika ary indostria hafa, mankafy fahitana ambony, fahatokisana ary laza eo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy anatiny.
Miaraka amin'ny fanahin'ny orinasa: Fananganana orinasa, Fambolena olona, ​​vokatra fararano ary serivisy tso-po sy fitsipiky ny orinasa: manao raharaham-barotra araka ny tokony ho izy, manao raharaha fiaraha-miasa miaraka, manao asa ifampiraharahana, ny orinasanay dia manolo-tena tanteraka amin'ny famatsiana ireo vokatra avo lenta, programa ary serivisy tena tsara, ary momba ny sandan'ny famoronana ho an'ny mpanjifa. jereo ny zava-nitranga taloha Raha dinihina, ny fanohanan'ny fiarahamonina dia ilaina amin'ny fahombiazan'ny Meijiahua; jereo ny ho avy, ny orinasanay dia hanohy hampanantena toky fandresena, hanolo-tena amin'ny fampandrosoana miaraka amin'ny mpiara-miombon'antoka ary hamorona rahampitso tsara kokoa miaraka.